Adobe® Illustrator® CS5 (Full Vision)
1.သင်ဒေါင်းထားတဲ့ RAR ဖိုင်ကို ဖြည်ယူပါ
2.ဖိုင်ဖြည်ပြီးနောက် ဖြည်ပြီးသားဖိုင်ကိုဖွင့်ပါ , ဖရိုဒါထဲမှ Adobe Illustrator CS5 Set-Up.exe ကို ကလစ်ပေးပါ
3.တပြိုင်နက် Install ပြုလုပ်ခြင်း စတင်နေပါပြီ။။။
4. "Accept" ကို ကလစ် ပေးပါ
5.'Install this product asatrial' ကိုရွေးခြယ်ပါ. language ပြောင်းပါ ပြီးနောက် Next ကိုနှိပ်ပါ.
6.Next နေရာတွင် Finish ပေါ်အောင်စောင့်ပါ.
အောက်တွင်အပိုင်း 8 ပိုင်းဖြင့် ခွဲခြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ အဆင်ပြေနိုင်ကြပါစေ